HTC အာရုံခံမှု (၃) စမ်းသပ်မှု | Androidsis
HTC Sensation (III) စစ်ဆေးခြင်း
el_iulius | | HTC က, reviews, လဲ tutorial
တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်း HTC ကြယ်ပွင့် terminal ၏ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏။ ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ် terminal ကိုဘယ်လိုအမှန်တကယ်လုပ်နိုင်လဲ ဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းအားများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်သည်အထိ HTC မှ high-end ဖြစ်သည်။
အထူးမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောမှတ်စုတစ်ခုဖြင့် HTC Sense သည်။ ၃.၁ HTC Desktop ၏ဗားရှင်းသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ အမှန်တရားကကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမှာအရသာကောင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်။ အမှန်တရားကတော့ချက်ပြုတ်သူများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Desire တွင်အချို့သော 'အင်္ဂါရပ်များ' ကိုစမ်းသပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဗားရှင်း 3.0 နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ The ဆိုးကျိုးများ သူတို့ဖြစ်ကြသည် အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော Las အလွန်သန့်စင်ပြီးကာတွန်းများသင်ဝစ်ဂျက်များကိုနှစ်သက်ပါကသင်၏လျှောက်လွှာအတွက်တစ်ခုသေချာသည် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကာတွန်းနောက်ခံပုံများ, သူတို့သည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။
ငါ့ကိုအထင်ကြီးစေသောအခြားအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် terminal ကိုမာလ်တီမီဒီယာစွမ်းရည်။ တစ်ခုရှိသည် အလွန်ကောင်းသော audio player အိမ်ထဲမှာရောအပြင်မှာပါနာရီနဲ့နာရီသီချင်းတွေကိုနားထောင်တဲ့ငါဒီဖုန်းရဲ့အရည်အသွေးကောင်းတယ်ဆိုတာငါတွေ့ခဲ့ရပြီ။ သူရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကအရမ်းကောင်းတယ်။ 8MPx ကင်မရာသည်မည်သည့်အလင်းအခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာ reflex ကင်မရာရဲ့အရည်အသွေးကိုမရောက်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ high-end terminal တော်တော်များများဆီကိုရောက်သွားတယ်။ Full HD တွင် 1080p ဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်းသည်သင့်ကိုစွဲမှတ်စေသည်။ အရည်အသွေးအပြင်အပြင်တွင်မြင့်မားသော fps ရှိပြီးအမြန်နှုန်းကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲလှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသောမြင်ကွင်းများတွင်မည်သည့်နောက်ကျအမျိုးအစားကိုမျှမဖော်ပြပါ။
ပါဝါကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး။ HTC Sense သည်ရွေ့လျားရန်အလွန်လေးလံပြီးဖြစ်သော်လည်း terminal မှသတိမထားမိပါ။ ၎င်းသည် Asphalt6HD ကဲ့သို့ HD ဂိမ်းများကိုရွေ့လျားနိုင်သည်ငါစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပြီ, အမှန်တရားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေး နှင့် အရှိန် အကျွန်ုပ်ကိုရောင့်ရဲစေ။ ၊ သင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအိမ်မှဝေးဝေးသွားလိုပါကဤဆိပ်ကမ်းသည်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲ Gameloft HD ဂိမ်းများကိုသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကိုမည်သည့်ပြtypeနာမှမရှိဘဲရွှေ့ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အားလုံးစမ်းသပ်မှု quadrant သူတို့ကငါ့ကိုပေး 2000/2100 Benchmark ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်။
စစ်ဆင်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါကြောင့်အဘယျသို့သောဖုန်းအဖြစ်ပြproblemနာမရှိ။ ဟုတ်ကဲ့, ဆက်ဆက်တင်ပြ ဝိုင်ဖိုင်လွှမ်းခြုံမှုပြproblemနာ သူတို့သည် HTC မော်ဒယ်သစ်အားလုံးကိုဆွဲယူနေကြသည်။ Desire S နှင့် Wildfire S အပြင်ငါပြောနေသည့် Sensation နှစ်ခုလုံးသည်ထိပ်၊ နောက်ကင်မရာအမြင့်တွင်ဖမ်းမိပါက WiFi လွှမ်းခြုံမှုကိုဆုံးရှုံးကြရသည်။ Terminal နှင့်ဒေါင်လိုက်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်သော်လည်းအလျားလိုက်နေရာချလျှင်သင်၏လွှမ်းခြုံမှုသည် ၅၀% အောက်ရောက်လျှင် connection point မှအချက်ပြမှုကိုသင်ဆုံးရှုံးကောင်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ 50G သို့မဟုတ် 3G လွှမ်းခြုံမှု၌များစွာသောငွေကိုယူပါ။ ငါနဲ့အခြားတယ်လီဖုန်းမရှိတဲ့ငါ့အိမ်ရဲ့နေရာတွေမှာသူနဲ့အတူရှိနေတယ်။ ငါတွေ့ပြီနည်းနည်းပြlittleနာဖြစ်ပါတယ် အသိပေးချက် LED သည်အားသွင်းသောအခါဘယ်သောအခါမှစိမ်းလန်းမှုမရှိပါအမြဲတမ်းလိမ္မော်ရောင်ရှိနေမည်။ ဒါကြောင့်သင်ကတကယ်တော့သူကတင်, အဆုံးသတ်မပြုခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။ charger ကို disconnect လုပ်ပြီးပြန်ချိတ်လိုက်ရင်အစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ယင်းကြောင့် ၄ လက်မမျက်နှာပြင်, သူမအကြောင်းပြောဆိုရန်ဘာမျှမ, ဆန့်ကျင်ပေါ်, အားလုံးကောင်းသောစကားများဖြစ်ကြသည်။ အိမ်မှဝေးဝေးသင်တတ်နိုင်သည် အလင်းပေါ်မှာဘယ်လောက်ပဲကျရောက်နေပါစေ၊ အမြန်နှုန်းနှင့်အရောင်များသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ ရှိပါတယ် အလွန်ကောင်းသောထိတွေ့နိုင်သောတုံ့ပြန်ချက် applications များနှင့်ဂိမ်းများအတွက်နှစ် ဦး စလုံး။ မပါဘဲအလုပ်လုပ်သည် multitouch နဲ့ပြproblemနာမရှိပါဘူးဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ်၊ အားလုံးအထက်ကသင်ရေးနေတဲ့ application ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ။
နောက်ဆုံးဘက်ထရီအကြောင်းပြောပါ ငါကစဉ်းစားပါ terminal ကိုအလွန်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ပရိုဆက်ဆာပါဝါ၊ လုံလောက်သော RAM (786Mb) နှင့် ROM (1GB)။ ငါကဟာ့ဒ်ဝဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌မည်သည့်အပိုင်း၌သေးငယ်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေထင်ပါတယ် ဒါဟာအတော်လေးမျှမျှတတဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းဘက်ထရီစွမ်းရည်နိမ့်သည်, ငါထပ်ခါတလဲလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ဖုန်းကိုအင်တာနက်ဟုခေါ်သည့်အင်တာနက်နှင့်သုံးပါကကိုယ်ပိုင်ပြproblemsနာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုသွားကြည့်ပါ၊ တိုင်ပင်ပါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့် Terminal ကိုစတင်တောင်းဆိုပြီးတာနဲ့ဘက်ထရီကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုဖုန်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်ရက်လုံးလုံး ၁၂-၁၆ နာရီဝန်းကျင်တွင်ပြaနာမရှိပါ။ သို့သော်သင်စတင်ကစားပါကသင်သည် ၆ နာရီဘတ်ထရီသက်တမ်းကုန်ဆုံးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သံသယဝင်သည်။ Aspahlt2၏ 6h တွင်၎င်းသည်ဘက်ထရီ၏ ၅၀% ကိုစားနိုင်သည် တိတ်တိတ်လေး။ ဒါကြောင့်ငါကမကောင်းတဲ့ဘက်ထရီကြောင်းမစဉ်းစားပါ။
ဒီဖုန်းကိုငါ့အသိအကျွမ်းတွေကိုအကြံပေးမလား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ငါက LG Optimus 2x နှင့် (အထက်တွင်ငါမြင်ဘူးသော) Samsung Galaxy SII ကိုကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်းရှေ့မှာ။ ၃ ခုလုံးသည်အလွန်အားကောင်းသောဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤတစ်ခုတည်း၌သာ HTC Sense3ရှိသည်။ ၎င်းသည်အချက်အလက်များစွာကို၎င်း၏မျက်နှာသာရစေလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
terminal terminal အတွက်ဗီဒီယိုအချို့ချန်ထားပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC Sensation (III) စစ်ဆေးခြင်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကြီး !!! ဤဖုန်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်၏အရသာ ၄.၃ for မျက်နှာပြင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမုန်းတီးခြင်းဖြစ်ပုံရပါသည်။ သို့သော် XD နှင့် sensation နှင့် galaxy S II တို့အကြားနက်ရှိုင်းသောထိတွေ့မှုကိုသင်အမှတ်အသားပြုသည့်အခါယခုကြည့်ရှုရန် XD ကယခုကြည့်ရှုနေသည့်အရာဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ညက Vodafone ထံမှအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိပြီးစပိန်အတွက် HTC အာရုံခံမှုကိုရရှိနိုင်သည်။
ဆိုးတာကတော့ ၃၄၉ ယူရိုနဲ့ ၆၀၀ မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ယူချင်ပေမယ့် ၃၄၉ ယူရိုမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်မှာသင်၏ကွန်ယက်များ၏တီးဝိုင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအာရုံခံစားမှုတစ်ခုရှိသည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်နှင့်မတူပါ။ ၂ ဂရက်သာကြာပါသည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Mica ပါသောအသစ်တစ်ခုသည်မက္ကဆီကန်ပီဆို ၅၅၀၀ ကုန်ကျပါမည်။
ကျွန်ုပ်၌၎င်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အချက်အလက်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရာ၌အလွန်လျင်မြန်သည်။ မျက်နှာပြင်သည်အန်နီယိုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်မည်သည့်အရာနှင့်မှနှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ Samsung Galaxy SII ကစတုရန်းမိုင်ပိုများတယ်၊ ငါသတိထားမိသည့်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချိန်ကချိတ်ဆွဲထားပြီးအလွန်အေးဆေးစွာမနေပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆန္ဒရှိခဲ့သည့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပင်ဆန္ဒတစ်ခုမျှမပါခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း ၁.mmmm ထိသွားသည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ mmmm …။ ဒါပေမယ့်ကြွင်းသောအရာအဘို့, ငါကအကြံပြုပါသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီမယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာ htc sentation ရှိတယ်၊ chat မှာရေးဖို့အလျားလိုက်သုံးလို့မရဘူး…ပြီးတော့ screen conf options တွေကအဆင်ပြေတယ်။
Android 2.3 Gingerbread ပါသောရေစိုခံစမတ်ဖုန်း Sony Ericsson Xperia Active
Huawei MediaPad၊ Android Honeycomb နှင့် dual-core ပရိုဆက်ဆာတို့ပါရှိသည်